खसी नदिँदा शिक्षक श्रेष्ठको हत्या – Mero Pradesh TV
meropradeshtv२०७७ मंसिर २६ गते
उनका अनुसार हत्याराहरूले एउटा खसी र एउटा बाख्रा मागेका थिए। ‘उनीहरूलाई श्रीमान्ले बाख्रा चाहिँ दिने भन्नुभएको थियो। खसी नदिँदा यस्तो घटना भयो,’ उनले भनिन्। श्रेष्ठ शिक्षक मात्रै थिएनन्, उनले समाजसेवीका रूपमा समेत आफूलाई स्थापित गरेका थिए। ‘रानो नै गएपछि यहाँको के हुन्छ ? अब विद्यालयको हालत के होला ? उहाँले जस्तो विद्यालय कसले सम्हाल्छ ?’ स्थानीय एक युवकले बताए। नागरिक दैनिकबाट
सुस्मिताको सम्झनामा लालगढमा दीप प्रज्वलन
जाडोमा डोम समुदायलाई बल्याङकेट ।
किर्ते जन्म दर्ता बनाएको आरोपमा वडा सचिव पक्राउ